अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग भेट, एमसिसीबारे चासो। - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग भेट, एमसिसीबारे चासो।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग भेट, एमसिसीबारे चासो।
काठमाडौं := दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालमा राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएका लूले शुक्रबार सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो ।
अध्यक्षद्वयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएका लूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)बारे विशेष चासो राख्नुभयो । तर, दुवै अध्यक्षबाट लूले मूर्त जवाफ भने पाउनुभएन ।
एमसिसीबारे सरकारले परामर्श गरेन, हाम्रो कुनै ठोस धारणा छैन : ओली
शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा लूले ओलीसँग भेटघाट गर्नुभयो । ओलीले एमसिसीबारे सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरेका कारण कुनै ठोस धारणा नबनाएको जवाफ फर्काउनुभयो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले एमसिसी पास गर्नेबारे चासो राखेपछि ओलीले आफू सरकारमा नभएको बेलामा बोल्ने स्थिति नभएको भन्दै सरकारमा भएका दलहरूले गरेको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय बनाउने बताएको एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
‘उहाँहरूले एमसिसी के हुन्छ ? भनेर प्रश्न राख्नुभयो । एमसिसीको बारेमा हामी अहिले सरकारमा छैनौँ, सरकारमा नभएको बेलामा यही गर्ने भनेर बोल्ने स्थिति छैन,’ ओलीले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सरकारमा भएकाहरूले के गर्ने भन्छन्, त्यो हेरेर निर्णय गरौँ ।’
भेटमा मन्त्री लूले अमेरिकाले विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलगायत क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई अझै विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री लूले अध्यक्ष ओलीसँग नेपालमा अमेरिकाले केही नयाँ क्षेत्र (क्लिन इनर्जी)को क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने चासो दिएको बताउनुभयो ।
‘अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ, त्यो क्षेत्रलाई हामी विस्तार गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो । दोस्रो केही नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा देखाउनुभयो, ‘उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरको बारेमा हामी हाम्रो मुलुकको तर्फबाट थप केही नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ भन्नुभयो । नेपालको आर्थिक विकास, सामाजिक, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिहरेको कुरामा विस्तार गर्न चाहन्छौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा विस्तार गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ ।’
ओलीले पूर्व–प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अमेरिकाले गरिरहेको सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । ओलीसँगको भेटघाटका क्रममा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्षबारे कुराकानी भएको थियो । भेटमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
एमसिसीबारे छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन्छौँ : प्रचण्ड
ओलीपछि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्नुभयो । प्रचण्डसँगको भेटमा पनि लूले एमसिसीबारे चासो राख्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डले मूर्त जवाफ दिुनभएन ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले एमसिसी पहिला नेपालले सम्झौता गरेअनुसार नरहेको भन्दै सबै पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएको सुनाउनुभयो । उहाँले अमेरिकाले दिएको डिसेम्बर १४ भन्दा अघिको समयसीमाभित्र ठोस निर्णयमा पुग्ने पनि बताउनुभयो ।
‘राम्रो वातावरणमा सौहाद्रपूर्ण र खुल्ला छलफल भयो, म छलफलबाट पूरै सन्तुष्ट भएको छु,’ भेटपछि दाहालले भन्नुभयो, ‘एमसिसीबारे मैले प्रष्टसँग भनेँ, हामी एमसिसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा विल्कुल छैनौँ ।
किनभने त्यत्रो पैसा नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक छ, तपाईंहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी लिन तयार छौँ । यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्, पहिला ओर्जिनल डकुमेण्ट जस्तो थियो, अहिले छैन, त्यसले कन्फ्युजन छ । अल पार्टी मिटिङमा हामी छलफल गर्छौं, हामी डिसेम्बर १४ अघि एउटा टुंगोमा पुग्छौँ ।’
एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालपछि सहायक विदेशमन्त्री लूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडसँग पनि उहाँले भेटघाट गर्नुभएको छ । भेटमा सहायक विदेशमन्त्री लू र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूले बिहीबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटका क्रममा दुई देशबीचको पारस्पारिक सम्बन्ध, सहयोग र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा एमसिसी सम्झौतालगायत विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो ।
बिहीबार दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको फाइजर खोप केन्द्र अवलोकन गर्नुभएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी र विकास साझेदारहरूसँग परिचित हुन लू तीनदिने भ्रमणका लागि बुधबार बेलुका नेपाल आउनुभएको हो ।
यसअघि, नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सबै भेटघाटमा एमसिसीबारे नै छलफल भएको थियो ।
अघिल्लो लेख ‘चपली हाइट ३’ को ट्रेलर सार्वजनिक।
पछिल्लो लेख भ्वाइस किड्सको भोटिङ पार्टनर ‘खल्ती’